Acmilan oo laba mashalaaye Macalin iyo Macalin ku xigeen ka dhiganeysa sanadka dambe
Tuesday, December 18th, 2018 - 22:46:01
Wednesday October 11, 2017 - 15:26:56 in Wararka by Kubad Bile
Riyada Milan ee Macalin Conte ayaa run usii ekaaneysa, sida ay maanta daabacday jariirada caan baxday Il Corriere dello Sport, kadib markii ay shaaciysay in Conte uu yahay dooqa koowaad ee Rossonneri.
Milan ayaa horey isugu da’yday in ay 2016 lasoo wareegto ka hor inta syan xilka u dhiibin Montela, maxaa yeelay macalin Montela maaha mid shaqo wanaagsan ka haya Milan oo qarsh xooggan l ageliyay.
Iyadoo 3 kulan laga adkaday kooxda kadib 7 kulan macalinka ayaa wajaha Qatar uu xilkisa ku weyn karo.
Maamulka Milan ayaa rumeysan in aysan macquul ahayn hadda Conte si toos ah loo dalban karo waxxase sidoo akle qabaan in marka uu xaggag soo idlaado uu Chesela ka tagayo.
Waa sababta ay Milan u qorsheyneyso in ay Rino Gattuso usoo dalacsiiso haddii ay shaqada ka ceyriso Milan oo kulanka Derby Milan lagu xeray musatqbalkisa, haduu uu lumiyana weyn kara booskiisa.
Milan ayaa dooneysa in Conte magacowdo horyaalka danmbe, inta ka dhiman waxaa kooxda sii hogaamin doona Gattuso, waa haddii Montela uu xilkiisa , basle waxuu dhankiisa doonayaa in uu cadeeqo inuu u qalmo shaqadan.
Qorshaha Milan ee ah Conte iyo Gattuso lagu mideynayo oo ayaa noqon doonta laba mashalaaye oo macalin iyo ku xigeenkiisa noqday, waxaa halkaas kasoo bidhaamaya in Milan dib u hanato taariikhdeeda kubadad cagta.